AirPods uye iPads vanokunda paCyber ​​Muvhuro | IPhone nhau
Aya mazuva mashoma apfuura abuda zvisingaite discounts pane akasiyana mawebhusaiti uye internet zvitoro nekuda kweChishanu Chishanu paCyber ​​Muvhuro. Iyi yekupedzisira yakaitika nezuro, gore rega rega rakapembererwa neMuvhuro mushure meKutenda chinangwa chiri chekukurudzira vashandisi kutenga online, mazuva matatu mushure mengano yeChishanu Chishanu.
Idzo dhata dzazvino kubva kuAdvista vaongorori dzinoratidza kuti ino Kisimusi inogona kupfuura iyo 100 mabhiriyoni emadhora mukutengesa kwepamhepo muUnited States. Munguva kubva munaNovember 1 kusvika 27, mari inopfuura mabhiriyoni makumi mashanu yatonyorwa kare. Uye zvakare, Apple yave iri imwe yemakambani akatengesa zvakanyanya neayo AirPods uye iPads.
Kutenga kweInternet kunowedzera gore rega rega kuCyber ​​Muvhuro
Nhema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro wave kuita chikonzero chekusiira isu mari pakutenga kwese kweKisimusi. Gore negore tinowona zvakawanda zvinopa zvinopa uye zvinoderedzwa kupfuura mumakore apfuura uye, dzimwe nguva, haugone kuramba chigadzirwa chawanga uchitsvaga kwenguva yakareba. Adobe yakaburitsa ayo ekutanga manhamba ekutengesa mazuva ano:
Vatengesi vepamusoro: Google Chromecast, Apple iPads, Samsung mapiritsi, AirPods, Sony Playstation VR.
Apple inoverevedza pakati pezvinhu zvakatengwa zvakanyanya neayo AirPods, yako isina waya mahedhifoni ane Bluetooth kubatana. Uye zvakare, vanove nechokwadi icho iyo Xbox One X, iyo Hatchimals uye Ride pamotokari ndanga ndiri pakati pevanotengesa zvakanyanya uyu Muvhuro weCyber. Iyo tekinoroji inoenderera kuva imwe yesimba yekutenga mazuva ano uye saka zvinogona kuonekwa zvese mukutengesa uye mukuwedzera kwezvigadzirwa zvinotengeswa nemakambani aya.
Adobe inoshandisa kungwara kwekunyepedzera kuburikidza Sensei, chikuva chinoratidza mabhiriyoni emapoinzi ekutengesa uye inoongorora iyo data uchishandisa Analytics. Ichi chishandiso chinoitawo kuti zvikwanise kuita bhalansi pane yasara yekutengesa mwaka weKisimusi, uchifungidzira kuti kutengesa kwepamhepo kunogona kusvika 100 bhiriyoni emadhora muUnited States pakupera kwemwedzi, nhamba dzakakwira zvakanyanya kupfuura idzo dzeKisimusi yekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » AirPods uye iPads vanokunda paCyber ​​Muvhuro
Apple inoburitsa yechishanu beta yeIOS 11.2 yevagadziri